Taageeridda Musharaxnimada Jabriil Ibraahim Cabdulle Maqaalka 1aad - Awdinle Online
Taageeridda Musharaxnimada Jabriil Ibraahim Cabdulle Maqaalka 1aad
Sida aan la socono doorashadu waxey ka mid tahay xuquuqaha aasaasiga ah ee uu muwaadinku leeyahay. Shaqsi walbaa ee Soomaaliyeed waxuu xaq u leeyahay in la doorto ama uu isagu wax doorto sida ku cad dastuurka dib u eegistu ku socoto ee lagu maamulo Dowladda Soomaaliyeed. Walow hoggaanka dalka uu ku fashilmay 8di sanno ee ugu dambeysay in himiloooyinkaas taariikhiga ah la hiigsado, haddana shacabka Soomaaliyeed qaasatan dhalinyarada marnaba maskaxdoodu kama eysan bixin in ey helaan xaqaas dastuuriga ah ee ka maqan.
Soomaaliya waa dal hodan ku ah oo uu Alle ku manneystay kheyraad dabiici ah, dhaqan guun ah, taariikh soo jireen ah, iyo xoog dhalinyaro. Waxa ka maqan ummadda Soomaaliyeed waa hoggaan aragti leh oo awoodi kara inuu dadkiisa u goleeyo markey xaaladdu degan tahay ama u guuro marka eey xaajadu adag tahay. Baahida ugu balaaran ee dadkeena heysatana waa hoggaan xumo siyaasaddeed. Ka dhalinyaro ahaan waxaan aaminsannahay in haddii la helo hoggaan siyaasi ah, damqasho leh, aragti dheer, codkar ah oo isla markaa na ah waayo arag aqoon gaamurtay leh in xaalka dalkeena uu isbeddel dhanka wanaagsan ah ku imaan karo.
Hadda ba waa kuma hoggaamiyaha loo baahan yahay afarta sano ee soo socota.
Afarta sano ee nagu soo fool leh, waxaa laga ma maarmaan ah in xoogga la saaro nabadeynta bulshada isla markaana la soo celiyo rajada ummadda, mugdida iyo cuqdadda soo kala dhex gashay shacabka Soomaaliyeedna meesha laga saaro. Ka dhalinyaro ahaaan waxaan u aragnaa in mudane Jabriil Ibraahin Cabdulle agaasimihi hore ee xarunta cilmibaarista iyo wadatashiga CRD uu noqon karo shaqsi ku sifoobay astaamaha laga rabo hoggamiyaha afarta sano ee soo socota.
Maxaa Lagu Xulan Karaa MD Jabriil Ibraahin.
Jabriil waa nabaddoon samadoon ah, waa aqoonyahan waayo arag ah, waa nabadeeye xaldoon ah oo 20 sano ka badan ka shaqeynayey xal u helidda khilaafka soo kala dhex galay qabaailka Soomaaliyeed. Muddadaas 20ka sano ah waxuu ka shaqeeyey nabad ku soo dabaalidda gayiga Soomaliyeed laga soo bilaabo Gaalkacyo ilaa Kismaayo, laga bilaabo Burtinle ilaa iyo Badhan. Jabriil waa nin dhalinyaro ah oo aan laheyn raadad mugdi ah oo dib loo milicsan karo. Sida uu ku tilmaamay abwaan Cabdi Dhuux, hoggaamiyaha dowlad lagu aaminayo waxaa lagu xushaa waayo aragnimo, aqoon iyo tagto aan la dhaliishaneen ama dhalinyaranimo aqoon eey u wehliso oo lagu nasiibsado. Musharax Jabriil ogaanteen wuu ku suntan yahay sifaadkaas uu abwaanku tilmaamay.
Dowladnimo ehel bey rabtaa
Aqoonyahan bey rabtaa
Aqoon u leh bey rabtaa
Waxey oran jireen
Xoolo ugub ka gado
Ama curad aan
iin iyo xumaan
Midna lagu ogeyn.
Waxaa laga ma maarmaan ah in shacabka Soomaaliyeed aan laga qasaarin afarta sano ee soo socotaa, waayo afartaas sano waxey keeni kartaa in dalka loogu jiheeyo dhanka horumarka waa haddii la iimaansado ololaha musharaxa rajada u ah malaayiinta Soomaaliyeed een ceelka u qodneyn cidina u maqneyn ama waxey afartaas sano noqon kartaa afar sanoo kale oo naga qasaartay.
Ka dhalinyaro ahaan waxaan u baahannahay in aanan ku fiirsan siyaasiyiinta ku ciyaareysa masiirka qarankeena oo waxaa la taagan yahay xilliga aan mideyn laheyn codkeena oo aan taageeri laheyn hoggaamiyaha xaldoonka ah ee noloshiisa badankeed isku howlay nabadeynta dadkiisa.
Waxaa wax aad loogu riyaaqo ah khudbaddi uu jeediyey Musharax Jabriil 27ka bishi lasoo dhaafay ee November, waayo waxaa uu taabtay dareenka bulshada qeybaheeda kala duwan. Waxuu carrabka ku adkeeyey walwalka eey la nool yihiin ciidamadeena sharafka leh iyo baahida dhalinyarada waxbaratay. Waxuu sidoo kale si caddaalad ku jirto oon qabyaalad iyo eex laheyn u tilmaamay marin-habowgi dowladnimadeena ku dhacay 8di sano ee u dambeysay.
Ugu dambeyn anigoo ku hadlaaya magaceyga iyo kan Madasha Dhalinyarada Samadoon waxaan ayidsannahay musharaxnimada, hanka, iyo hamiga MD Jabriil Ibraahin waayo waxaan u aragnaa in uu yahay shaqsiga kaliya ee lagu aamini karo masiirkeena, masiirka ummadda, iyo kan waddanka.
Waxaa qoray: Cali Ugaas
Previous articleTaiwan & Somaliland oo heshiis Cusub kala saxiixday
Next articleFarmaajo oo xil Cusub u Magacaabay Danjire Yuusuf Garaad